As of Wed, 21 Aug, 2019 20:05
जोगबनी र ठूला मलको चेपुवामा साना व्यापारी
सीमावर्ती भारतीय बजार जोगबनी र पछिल्लो समय विराटनगरमा खुलेका ठूला मलको चेपुवामा साना व्यापारी परेका छन् । जोगबनीका कारण विराटनगरको व्यापार चौपट भएको व्यापारीहरू बताउँछन् । जोगबनीबाट खुलमखुल्ला सामान आयात गर्न दिएकै कारण व्यापारी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको खुद्रा व्यापार संघ विराटनगरका अध्यक्ष सञ्जयकुमारसिंह मण्डलले बताए । उत्पादनको अन्तिम बिन्दु व्यापारी अहिले रोएर बस्नुपरेको उनको गुनासोे छ ।
प्रतिनिधिसभामा रवि लामिछानेदेखि ज्योतिष लाइसेन्ससम्म
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले विभिन्न विषयमा आफ्नो धारणा राखे । शून्य समय र विशेष समयमा विभिन्न पार्टीका सांसदहरुले समसामयिक विषयमा धारणा राखेका हुन् ।
भारत, ईपीजी प्रतिवेदन, डा. भट्टराई
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले बिहीबार (आज) बाट सुरु हुने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल हुने स्पष्ट पारेका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले भारतीय विदेशमन्त्री डा. सुव्रमन्यम जयशंकरको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेपाल र भारतबीच बहुपक्षीय, फराकिलो र नजिकको सम्बन्ध रहेकोले छलफलको लागि धेरै विषयहरु रहेको सुनाए । यद्यपि उनले कतिपय विषयहरु समाधान उन्मुख रहेको पनि जिकिर गरे ।
सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख पूर्वमन्त्री बस्नेत
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतले वर्तमान सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुन लागेको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि प्रेसविरोधी ल्याउन लागेको बस्नेतको आरोप थियो । उनले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर प्रेस जगतलाई नै समाप्त पार्न लागेको आरोप लगाए ।
‘पार्टी एकता मानापाथी जोखेजस्तो होइन’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य तथा स्कुल विभाग प्रमुख ईश्वर पोख्रेलले माना पाथी जोखेजस्तो पार्टीमा सन्तुलन नमिल्ने बताएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी क्षेत्र नम्बर ५ ले मंगलबार राजधानीको बसुन्धरामा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पोख्रेलले पार्टी भित्रको जिम्मेवारी बाँडफाँडलाई तुलोमा जोख्न नमिल्ने बताएका हुन् । उनले नमिलेका विषयलाई प्रक्रियाबाट नै मिलाउदै जानुपर्ने बताए ।
राजपामा अध्यक्ष मण्डलीय प्रणालीमै जानसक्ने
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को महाधिवेशन तोकिएको मितिमै भए अध्यक्ष मण्डलीय संरचनाकै निरन्तरता हुने देखिएको पार्टीका नेताहरूले बताएका छन् । अध्यक्ष मण्डलका सबै नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै अध्यक्ष मण्डलको निरन्तरताबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि नेपाली राजनीतिको व्यवहारमा यसको विस्तार भएको देखिएको कतिपयको दाबी छ ।
निर्वाचन आयोगद्वारा रणनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार
निर्वाचन आयोगले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र मितव्ययी निर्वाचनको लक्ष्य राखेर तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (आव २०७६-०७७–२०८०-८१) को मस्यौदा तयार गरेको छ ।
छिमेकीका विषयमा हलुका टप्पणी नगरौं :परराष्ट्रमन्त्री
नेपाल र उसका निकटका छिमेकी तथा बाह्य सम्बन्धका बारेमा हलुका टीकाटिप्पणी नगर्न सरकारले सबै राजनीतिक दल र तिनका नेतासँग आग्रह गरेको छ । केही दिनअघि प्रतिनिधिसभा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा आँच पुग्ने गरी एक जना सदस्यले गरेको टिप्पणीप्रति असहमति जनाउँदै सरकारले त्यस्तो आग्रह गरेको हो । “नेपालले कहिल्यै कल्पना नगरेको विषयमा गरिएको टिप्पणी सरकारलाई अस्वीकार्य छ,” परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा संवाददातामाझ भने ।
केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन र पोलिटब्युरो गठन बाँकी
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक आइतबार (आज)का लागि बोलाइएको छ । एकताका बाँकी कार्य पूरा गर्नका लागि थप छलफल गर्नुपर्ने भएकोले बैठक बोलाइएको हो । यसअघि शुक्रबार ३२ केन्द्रीय विभागको जिम्मेवारी तोक्दै एकीकरण प्रक्रिया लगभग पूरा गरेको नेकपाको केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन, पोलिटब्युरो गठन, जनवर्गीय संगठनका इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज निर्धारणको काम बाँकी छ । सम्पर्क समन्वय कमिटी, विशेष प्रदेश कमिटी, प्रवास सङ्गठनको एकता बाँकी रहेको छ ।
अर्को चुनावपछि कांग्रेसको सरकार : रिजाल
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि प्रश्नोत्तरको समय उपलब्ध नगराएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्बोधन गरेका थिए । संसद सञ्चालन नियमावलीअनुसार सम्बोधनपछि प्रश्नोत्तरको समय उपलब्ध नगराइएको प्रति सांसद रिजालले व्यंग्यात्मक शैलीमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए ।
कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय प्रबद्र्धन विधेयक पारित गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन आइतबार अन्त्य भएको छ । प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि तथा पशुपञ्क्षी व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई पारित गरी बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो ।
गीता र वेदमा समानताको चर्चा छ : थापा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले हिन्दूहरुको धार्मिक ग्रन्थ गीता र वेदमा जातीय विभेदको नभई समानताका बारेमा चर्चा गरिएको बताएका छन् । राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक उत्पीडित उत्थान संगठनले ५६ औं मुक्ति दिवसको अवसरमा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले हिन्दूहरुको धार्मिक ग्रन्थमा जातीय छुवाछूत नभएको बताएका हुन् ।
पाँच विधेयक सम्बन्धित समितिमा
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आइतबार पाँच विधेयक दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । ‘प्रमाण (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५’, ‘बिरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’, ‘बीउबिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५’ ‘राष्ट्रिय खेलकूद विकास विधेयक, २०७५’ र ‘खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, २०७५’ समितिमा प्रस्ताव प्रस्तुत भएको हो ।
‘सरकार अधिनायकवादतिर गएको छैन र जाँदैन'
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार अधिनायकवादतिर नगएको दाबी गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारबारे नचाहिने हल्ला चलाइएको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाए । जनताको निराशामा टेकेर सरकारबारे नचाहिने हल्ला फैलाइएको उनको भनाइ थियो । “जनताको विश्वास भत्काउने प्रयास गरिँदैछ । कोहीभन्दा कम लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेर सफलता प्राप्त गरेको होइन हामीले ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई लक्षित गरी बम विस्फोट गरिएको छ । कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकाको गाउँसभा उद्घाटन गर्न पुगेका मुख्यमन्त्री शाहीलाई लक्षित गरी कार्यक्रम स्थल नजिकै बम विस्फोट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटले जनाएको छ ।
ताइवानलाई ८ अर्ब डलरको फाइटर जेट बिक्री गर्दैै अमेरिका
भन्सारमै थन्किए सवारी साधन
क्यामेराको निगरानीमा बजार
एनआईसी एसिया ब्यालेन्सड फन्ड एकाइको निष्कासन बन्द हुने